UPVC ugu Fiican & Warshadaha Soo -saaraha Biibiyaha ee Hindiya
UPVC Tayada ugu sareysa
Soo -saaraha Dhuumaha Tiirka 100% tuubooyinka tiirarka uPVC aan miridhku lahayn ee Power Lock si loo dhiso ceelal biyo oo hufan Muuqaal Range
Soo dejiso Katalog uPVC HDPE tuuboyinka
Manufacturer Horumarinta ilbaxnimada iyo guud ahaan warshadaha ayaa had iyo jeer is tusta inay aad ugu firfircoon tahay burburinta kaymaha taas oo wax kasta oo loo sameeyay ilaalinteeda iyo wax soo saarkooda ay yihiin kuwo aan qiimo lahayn marka la barbardhigo. Muuqaal Range Soo dejiso Katalog
Ma waxaad raadinaysaa uPVC Column & PVC Tuubbada Kaydka?
uPVC Shirkadda Warshadaynta Dhuumaha Biyaha
Inaad noqoto hormuudka maaraynta biyaha ee ISO 9001, sumad-sameynta biibiile ee Hindiya, annaga oo ah Vinyl Tubes, daryeel dhammaan baahiyahaaga maaraynta biyaha. Waxaan bixinnaa Tuubooyinka Tiirka uPVC Tayada ugu Sareysa, Kaydka & Dhuumaha Shaashadda Fiican, Dhuumaha Piezometric, Dhuumaha Cadaadiska, Dhuumaha SWR, Dhuumaha Dheecaanka iyo Dhuumaha Tuubooyinka ee baahida maareynta biyahaaga. Waxaan u fidineynaa xalka badeecada ugu fiican macaamiisheena iyada oo loo marayo hal -abuurnimo joogto ah, hal -abuurnimo xad -dhaaf ah, habab kala duwan, iyo alaab tayo leh.
Si loo helo jagada hoggaaminta iyadoo la siinayo xal wax -ku -ool ah oo loogu talagalay dhuumaha biyaha, hubinta qanacsanaanta macaamilka iyada oo gacan ka geysaneysa guushooda.
Hoggaamiyaha caalamiga ah ee biibiilaha biyaha Si aad ugu soo baxdo hoggaamiye caalami ah oo ku jira warshadaha biibiilaha biyaha iyada oo loo marayo horumarinta iyo qaadashada tiknoolojiyada cusub iyo habka hagar la’aanta ah ee loogu beddelo fikradaha hal -abuurka ah xaqiiqooyin aan caadi ahayn.
Si biyo -dhaamintu u noqoto mid si fiican u dhaamisa adduunka oo dhan si heer sare ah oo leh heer ammaan oo heer sare ah iyada oo la ilaalinayo awooddeeda mar walba. Markaa, waxaan sugaynaa inaan badbaadino 1.3 bilyan oo unug oo koronto ah dadaalkeena.
Alaabooyinka uPVC ee aan Bixinno
Khubarada Maaraynta Biyaha
Tayada ugu sareysa ee uPVC Dhuumaha Dhuumaha Saabuunta 100% tuubooyinka tiirarka uPVC aan miridhku lahayn oo leh Quful Awood si loogu dhiso ceelasha biyaha ee hufan Guriga Adeegyadeena uPVC…
Tuubada cadaadiska uPVC
Dhuumaha Cadaadiska ee uPVC waxaa la siiyaa godad cad oo ku habboon isku -xidhka sibidhka dareeraha ah iyo dhammaadka Dawanka marka la codsado. Codsiga ugu weyn ee Tuubooyinka Cadaadiska uPVC waa beeraha, biyo -gelinta, waraabka faleebada, khadadka rusheeyaha, iwm iyo sidoo kale qaybinta biyaha la cabbo.
Waa maxay sababta Dhuumaha Vinyl?
Waxaa jira hal sabab oo keliya oo aad ugu dooran lahayd tuubooyinka Vinyl baahidaada maareynta biyaha: Kalsooni, daacadnimo iyo isku halayn. Waxaa lagu aaminay 44 dal oo leh in kabadan 100+ qaybiyeyaal caalami ah, oo caan ku ah isku halaynta 4 jiil ee ugu dambeeyay, waxaan nahay Vinyl, waxaan siinaa tuubooyin leh dammaanad dhammaystiran iyo dammaanad qaadka badeecadeena.
Vinyl waxaa ka go'an inay macaamiisheeda siiso alaab tayo sare leh oo aan iin lahayn iyada oo loo marayo barnaamij horumar joogto ah. Tayada ayaa ka horeysa tirada, taas oo ah hal -ku -dhigga shirkadda. Vinyl sidoo kale waxay ku taageertaa macaamiisheeda adeeg farsamo oo hogaaminaya warshadaha, iyo taageero farsamo iyo tababar.
soo socda Soon
Xoog -shaqaale u go'ay
Bulshadu Ku Hesho
Asalka Vinyl wuxuu dib ugu soo laabanayaa 1941, waxaana loo aasaasay ganacsi qoysku maamulo. Sannadkii 1971 -kii, Vinyl wuxuu aasaasay warshaddii ugu horreysay ee PVC ee Waqooyiga Hindiya. Hadda waxaa maamula jiilka saddexaad ee qoyska, Vinyl wuxuu u taagan yahay ganacsi si wanaagsan loo maamulo oo leh tobanaan sano oo khibrad ah oo ka dambeysa.
Vinyl waxay ku faantaa shaqaale ka go'an oo karti leh, oo diiradda saaraya dhisidda badeecadaha hormuudka ah. Sababtoo ah khibradda shirkadda, Vinyl wuxuu awooday inuu naqshadeeyo tuubooyinka PVC iyo uPVC oo bixiya khasaare hoose oo khilaaf ah. Vinyl ayaa sidoo kale soo saartay quful quful awoodeed oo sugaya oo loo isticmaalo dhuumaha tiirka.
Warshadda Vinyl ee Waqooyiga Hindiya waxay fidisaa in ka badan 65,000 aag sq.m, oo ku qalabeysan khadadka farsameynta tuubooyinka Jarmalka, iyo in ka badan darsin CNC ah. Waxay ka baaraandegaan 12,000 MT oo uPVC ah sannadkii, waxayna u maraan tiirka, sanduuqa, SWR iyo tuubooyinka cadaadiska. Warshad cusub ayaa ka soo socota magaalada dekedda leh ee Kandla, taasoo siinaysa Vinyl faa'iidooyinka gaarsiinta degdegga ah ee adduunka.
Waxaan Keennaa Khibrad
Codsiyada tuubooyinka uPVC
Waraabka / Beeraha
Korontada / Isgaarsiinta
Dhuumaha VINYL Qof walba
Waxaan nahay hogaamiyaha sumadda maaraynta biyaha ee ISO 9001
Tayo dammaanad leh. Heerka wax soo saarka farshaxanka iyo ISO, NSF, WRAS, ASNZ, CE - EUROGLOBAL la xaqiijiyay.
Faa'iidooyinka Dhuumaha VINYL
Dhul yar oo iska -horimaad
WAA MAXAY MACMIILKEENU SHEEGAYAAN
Difaaca Dhismaha Kanada
“SCG waxay sii wadaa inay bixiso adeeg aad u fiican iyo karti farsamo oo aad u wanaagsan mashaariicda kala duwan min yar ilaa baaxad weyn. Waxa ugu muhiimsan SCG waxay ku dadaaleysaa inay fahanto ujeeddooyinka mashruuca guud waxayna bixisaa xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah. Ballan -qaadkooda ah inay bixiyaan adeeg gaar ah ayaa ka muuqda hawl kasta oo ay qabtaan. “
“In ka badan 10 sano oo ay la shaqeynayeen Warshadaha SCG goobaha wasakhaysan bay'ada waxay si joogto ah u muujiyeen karti farsamo oo aad u wanaagsan iyagoo hubinaya adeegga macaamiisha ee sarreeya. Habka wada -shaqayntooda iyo dabacsanaanta waqtiga dhabta ah ee la -qabsiga xaaladaha is -beddelaya ayaa gacan ka geystay guusha ujeeddooyin badan oo mashruuc ah. “
Intii aan la shaqeynayay SCG mashruucan, waxaan helay Mike Campbell iyo kooxdiisaba inay aqoon sare leeyihiin oo natiijooyinku keeneen. Iyada oo ku saleysan tijaabada tijaabada ah ee horudhaca ah iyo faham xooggan oo dhulka hoostiisa ah. xaaladaha, gaar ahaan bay'ada sariirta ee jaban. ku taageeray shaqadooda mashruucan. "
Abuuritaanka Mustaqbalka Biyaha
Maxaa Ka Socda Bogayaga?
La xiriir xafiiskayaga si aad u hesho xigasho bilaash ah! Had iyo jeer way fiican tahay inaad fikrad adag ka haysato miisaaniyaddaada
marxaladdan si ay noo suurtogeliso inaan soo xigano hadba sida loo baahdo
Si xawli ah u sii kordhaya sii xumaanshaha biyaha iyo nidaamyada bulaacadaha sababtuna tahay daxalka, dillaacyada, iyo jebinta qalabka biibiilaha birta ayaa hor boodaya awoodda aan u leenahay inaan siino nadiif iyo…
“Suuqa mar walba waa is-beddelayaa, talada weynna waa in la dhegeysto halka uu ku socdo suuqa oo la waafajiyo qalabkaaga, ganacsigaaga, mareegahaaga si aad ugu habboonaato…
Heerarka Tayada iyo Cimilada xun iyo Xaaladaha Deegaanka ayaa JA Trudeau u beddelaya Yartruba Vinyl Pipes waxay ka bilaabeen dhuumaha tiirka ee Ruushka iyo gobolka CIS…
Mashaariicda maareynta biyaha iyadoo la isticmaalayo bambooyin hoostooda ku jira ayaa si weyn ugu tiirsan tuubooyinka tiirka si ay biyaha uga soo saaraan ceelka si hufan. Sidan oo kale, hubinta tayada sare ee…
Haddii aad tahay Borewell Driller ama bixiye bamka & tuubooyinka oo wali isticmaalaya tuubooyin bir ah markaa balooggan adiga ayaa iska leh. Waa inaad…